Myanmar Monk Student Association: ကျောက်ကွင်းဝါဒပြိုင်ပွဲ (၂၈)
ဥပမာ ပုံစံပြောရမယ်ဆိုရင်- ကျောင်းနေပြီး ပညာသင်ကြား အားထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဘီအေ၊ အမ်အေ၊
အိုင်စအီ က်စ-် စတဲ့ စာမေးပွဲတွေအောင်ပြီး ဘွဲ့ဒီဂရီတွေရခဲ့တအဲ့ တွက်ကြောင့် မြို့အုပ်၊ ၀န်ထောက်၊
အရေးပိုင်-အစရှိတဲ့ အကျိုးတွေ ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီပရိသတ်ထဲက အရေးပိုင် မဖြစ်ချင်တဲ့လူ၊ ဘုရာင်ခံ
မဖြစ်ချင်တဲ့လူရှိပါသလား? ရှိမယ်မဟုတပ်ါဘူး၊ အားလုံးဖြစ်ချင်ကြမှာပဲ၊ သို့သော် ဘာကြောင့် မဖြစ်ကြသလ?ဲ
ဖြစ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းတရားတွေကို အားမထုတ်ခဲ့လို့ပေါ့။ သာမညလူက သူဌေးကြီးဖြစ်တာ
အံ့သြစရာကောင်းတယ်၊ သူဌေးသားက သူဌေးဖြစ်တာ ဘာများ အံ့သြစရာ ရှိပါ့မလဲ။ သည်လိုပဲ
လူကဘုရားဖြစ်တာ အံ့သြစရာပေါ့၊ ဘုရားကဘုရားဖြစ်နေဖို့ မလိုပါဘူး။ ဘုရားကဘုရား, လူက
လူဖြစ်တယ်ဆိုတာ အံ့သြစရာလား? လူက ဘုရားဖြစ်ရင် ဘုရားက လူဖြစ်ရင်၊ လူက မျောက်ဖြစ်ရင်၊ မျောက်ကလူဖြစ်ရင်၊ အံ့သြစရာမကောင်း ပေဘူးလား?။
“ပြောတိုင်းသာ ယုံကြစတမ်းဆိုရင် အားလုံးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဆိုတာတွေဟာ အလကားချည်း
ဖြစ်ရတော့မယ်။ လူမဆိုထားနဲ့ တိရစ္ဆာန်တောင် ယုံထိုက်မှ ယုံတာ၊ ခွေးတစ်ကောင်ကို
သူ့သခင်ယောင်ဆောင်ပြီးပြလို့ ယုံမယ်ထင်သလား? မြင်းတို့၊ နွားတို့လည်း ဒီလိုပဲ၊ ဆင်ဆိုတာ ပိုတောင်
ဆိုးသေးတယ်။ စီးနေကျ သူ့ဦးစီးမဟုတ်ရင် ခါချပြီး နင်းသတ်တာမျိုး ဒီအထိ သူတို့လည်း ဉာဏ်တွေရှိတာပဲ။ ငါ- မင့သ် ခင်လုပ်မယ်ဆိုရနုဲံ့ ရတာမျိုးတော့ကျွန်ပ်တို့ လူသား လူတွေပဲရှိတာ ဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကိုမစဉ်းစားချင်ကြဘူး။ လွမ်းစရာပြောရင်လွမ်းပစ်လိုက်တာပ,ဲ ဟုတ်လို့ လွမ်းတာက နည်းနည်း၊လွမ်းစရာကောင်းလို့ လွမ်းကြတာပါ။ ပွဲထဲများ ကြည့်ပါလား၊ ဇာတ်ကတယ်ဆိုတာ ငှါးတဲ့သူက ပိုက်ဆံပေးလို့လာကတာ။ ပွဲကြည့်တဲ့လူတွေက လွမ်းခန်းမှာ မျက်ရည်များသုတ်လို့ ဟိုမှာ တကယ်ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူး၊ ဇာတ်ကနေတာပါ၊ သူ့မှာ တကယ်ဖြစ်နေတယ် အံ့ရော”။
“အဒဲါကျုပ်တို့ လူမျိုးတွေပဲ၊ ဟုတ်မဟုတ်ယုတ္တိသဘာဝနလဲ့ ည်း နည်းနည်းတော့စဉ်းစားကြဦးမှပေါ့။
ပြောတိုင်းယုံဖို့ဆိုတာ ကောင်းလည်းမကောင်းပါဘူး။ သဘာဝလည်းမကျပါဘူး။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ မျက်စိ၊ နား၊ နှာ၊လျှာ၊ ကိုယ် အတွေးနှင့်လည်း လေ့လာစဉ်းစား ကြဦးမှပေါ့”။
“ဘုရားက ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာ ယုတ္တိမရှိပါဘူး။ ဒါကို ကိုးကားပြောဆိုလို့ ကောင်းတဲ့
မြန်မာစကားတောင် မဟုတ်ဘူး။ ဘုရားက ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာ ယုတ္တိကင်းမဲ့တဲ့ အတွက် ယုံကြည်ဖို့
အလွန်ခဲယဉ်းပါတယ်။ ပြောတိုင်းမယုံကြည်ကြပါနဲ့။ စဉ်းစားပြီးမှ ယုံကြပါ။ လူတစ်ယောက်ဟာ ကျောင်းနေပြီးစာမသင်ဖူးပဲနဲ့ ဘီအေ၊ အမ်အေ၊ အိုင်စီအက်စ် အောင်တယ်ဆိုတာ မိတ်ဆွေတို့ ယုံကြမလား?လယ်သမားတစ်ယောက်က လယ်ထဲဆင်းလည်းမဆင်း၊ ထွန်လည်း မထွန်၊ ပျိုးလည်း မနှုတ်၊ ကောက်လည်းမစိုက်၊ ရိတ်နယ်ခြင်း မပြုပါဘဲနှင့် အိမ်ပေါ်မှာ အိပ်နေရုံမျှနဲ့ စပါးရနိုင်ပါ့မလား? ဘယ်တော့မျ မရနိုင်ပါဘူး။လုပ်မှကိုင်မှ ရကြတယ်ဆိုတာ အထင်အရှားပါ။ အခုလည်း ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘုရားဖြစ်ဖို့ လုပ်ငန်းများကိုမလုပ်ပါဘဲနဲ့ ယုတ္တိရပှိါ့မလား? ယုတ္တိမရှိပါဘူး။ အဒဲီလို ယုတ္တိ မရှိတာကို ယုံသင့် မယုံသင့် စဉ်းစားကြည့်ကြစမ်းပါ”။
“ထာဝရဘုရားကတော့သသူ့ာယုံကြည်ကိုးကွယ် ဘာမှမပူနဲ့တဲ့။ ကဲယုံကြမလား? ယုံနေတဲ့သူတွေ
အခုဒီမှာ အများကြီးပဲထာဝရပေးလို့ရတဲ့ ဆန်စပါး ဘယ်နှစ်ယောက်စားရဖူးသလ?ဲ ကိုယ့်ဟာကို
လုပ်လို့ရတာသော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ ရှာကြံလို့ ရရှိတဲ့ ပိုက်ဆံနှင့် တန်ရာတန်ကြေးပေးမှ
ရရှိကြတာချည်း မဟုတ်ပါလား? ဦးပဇင်းတို့ရဲ့ ဂေါတမရှင်တော်ဘုရားကတော့ (အတ္တာဟိ အတ္တာနော
နာထော)တဲ့၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကို ကိုးကြတဲ့။ ကဲ …ဒီတော့ကာ လက်တွေ့မှာ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ရတာကို
ထင်ရှားမနေပေဘူးလား? ဘယ်ဘုရားဟောတာက ခုလူတွေမှာ လက်တွေ့မှန်သလ?ဲ ခရစ်ယာန်
ဓမ္မဆရာကြီးတွေပြောသလို ထာဝရဘုရားမှာ တန်ခိုးတော်အနန္တရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဓမ္မဆရာကြီးတွေကိုယ်တိုင် ဒီထိအောင်ပင်ပန်းခံပြီး လာနေစရာတောင် မလိုဘူး။ အိမ်ကနေပြီး ထာဝရဘုရားကို တိုင်တည်
ဆုတောင်းလိုက်ရင် အားလုံးကိစ္စ ပြီးနေတော့မယ် မဟုတ်လား? ဦးပဇင်းတို့လည်း သူတို့ရဲ့ ဆုတောင်း
ပြည့်သွားတဲ့အတိုင်း ရှုံးပြီး အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်နေရပုဲံရှိတော့တယ်။ ဘာမှကို ပြောနေစရာမလိုတော့ဘူးမဟုတ်လား?”
“ဟော--အခုတော့မနကအ် ချိန်ကပဲလူတွေဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကို ကူးပြောင်းလာနေကြပြီ။ ဘာပြုလို့
အနန္တတန်ခိုးတော်ရှင်ထာဝရဘုရားဟာ သူ့ကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြည်ညိုတဲ့ လူတွေဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကို
ကူးပြောင်းလာတာ ကြည့်နေရသလ?ဲ (သြဘာသံများ)
“နောက်တစ်ခါ သတ္တမအချက်က သုံးခုတစ်ဆူ ဘုရားဆိုတဲ့ ကိစ္စ၊ ဓမ္မဆရာတစ်ယောက်က
ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်အားဖြင့် သုံးခုပေါင်း ဘုရားတစ်ဆူ ဖြစ်တယ်လို့
ပြောသွားတယ်။ ခမည်းတော်ဆိုတာက ထာဝရ၊ သားတော်ဆိုတာက ယေရှုခရစ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
ထာဝရနှင့်ယေရှုခရစ်တို့ဟာ တူပါတယ်တဲ့။ မတူတဲ့အကြောင်းကို ဦးပဇင်းက ပြောပြရသေးတာပေါ့၊
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ ထာဝရဘုရားက လက်စားချေဖို့ ဟောတယ်။ ကိုယ့်သွားတစ်ချောင်းကို ချိုးရင်
သူ့သွားတစ်ချောင်းကို ချိုးပစ်ရမယ်တဲ့။ ကိုယ့်မျက်လုံးတစ်လုံကို ဖေါက်ရင် သူ့မျက်လုံးတစ်လုံးဖေါက်ရမယ်တဲ့။
(AN EYE FOR AN EYE) ဆိုတဲ့ တရားပေါ့။ အဒဲါဟာ ခမည်းတော်ထာဝရဘုရားရဲ့ တရားပါပဲ။
အဲ….သားတော် ယေရှုခရစ်ကတော့ လက်စားမချေဖို့၊ သည်းခံဖို့ဟောတယ်။ ညာဘက်ပါးကို
ရိုက်လာလျှင် ဘယ်ဘက်က ပါးကိုပါ အရိုက်ခံလိုက်ပါတဲ့။ အဲဒီတော့ ခမည်းတော်နှင့် သားတော်
ကွဲမနေပေဘူးလား? ဟောတဲ့တရားဟာ ဒီလောက်ကွဲနေရင် တူတယ်ဆိုတဲ့ စကားဟာ မဟုတ်နိုင်တော့ဘူး။